China Gravity Racking umzi-mveliso kunye nabavelisi |UKWAZISA
I-1, i-Gravity racking system iquka izinto ezimbini: ukwakheka kwe-static racking kunye ne-dynamic flow rails.
I-2, ii-Rail ezihambayo ezinamandla zihlala zixhotyiswe ngeerola ezibanzi ezigcweleyo, ezibekwe ekwehleni ngobude berack.Ngoncedo lomxhuzulane, i-pallet ihamba ukusuka ekupheleni kokulayisha ukuya ekupheleni kokukhulula, kwaye ilawulwa ngokukhuselekileyo ngamabhuleki.
Uhlobo lweRacking: I-Gravity racking
Isicelo: Uxinaniso olukhulu lokugcina kunye nokujikeleza okuphezulu koluhlu
①FIFO uhlobo racking
Xa i-pallet isusiwe, i-pallet elandelayo iqhubela phambili kwindawo yokukhulula.Ivumela ukujikeleza kokuQala kokuQala (FIFO), okuvumela ukuhamba kweepalati ukusuka kwindawo ukuya kwenye ngaphandle kokusetyenziswa kwezixhobo zokuphatha izinto.
② Ikhuselekile ekusebenzeni
I-Operator kunye ne-forklift akufuneki ukuba ingene ngaphakathi kwi-racking yokulayisha kunye nokukhulula i-pallet, ngoko ikhuselekile ekusebenzeni, kwaye izisa umonakalo omncinci kwiyunithi yokurakisha.
③ Umthamo wokugcina kunye nemveliso
◆I-Gravity racking sisisombululo esigqwesileyo sokusetyenziswa kakhulu kwendawo yokugcina, ngenxa yoyilo lwendlela enzulu kunye nokufikelela lula kwiipalethi ezisuka kwiindawo zokubeka.
◆Imveliso yanda kakhulu, njengoko kuthatha ixesha elincinci lokuhamba kwe-pallet ukusuka ekupheleni kokulayisha ukuya ekupheleni.
◆Igcina indawo yokugcina impahla ngokususa iipaseji, ngoko ke iindawo zokugcina iipalethi zonyuswa ngokufanelekileyo.
④ Uyilo olukhethekileyo ekulayisheni nasekukhetheni ukuphela
Ukwazisa kubonelela ngoyilo olukhethekileyo ekulayisheni nasekukhetheni isiphelo, oko kukuthi ukwenza umqadi wesiphelo ngeegrooves ezininzi.Indawo ye-grooves iyafuneka ukuba ihambelane ne-pallet voids position.Injongo kukunceda i-forklift ifumane i-pallet lula, kwaye ugweme umonakalo kwi-beam.
Ngaphambili: Qhuba kwi Racking
Okulandelayo: Push Back Racking